Ogaden News Agency (ONA) – BAAQ: CAMBAARAYN IYO DIGNIIN SHIRKII “QUDHUN DAAC”
BAAQ: CAMBAARAYN IYO DIGNIIN SHIRKII “QUDHUN DAAC”
Posted by ONA Admin	/ November 28, 2012
Odayaasha, waxgaradka, aqoonyahanka, iyo dhamaan laamaha bulshada ee Jaaliyada Ogaadeenya ee Gobolka Minnesota Dalka Maraykanka waxay cambaarayn kulul u soo jeedinaysaa Dambiile Abraha Wolde (Quarter) iyo gacan yarahiisa gacan ku dhiigle Cabdi Iley. Akhlaaqda iyo damiirka rux-kasta oo aan qaadan karin dulmiga kuwa dulmiga ku nool ayaa diidaya Shirki Qudhun Daac ee qasabka lagu keenay odayaal iyo shacab ah si loo bah-dilo. Shirkaas oo lagu qabtay Jigjiga bishan Nofeembar 13 iyo maalmihi ka dambeeyey. Hadii aanu nahay Jaaliyada Minnesota ee ka soo jeeda Dhulka Soomaalida Ogaadeenya waxaan u sheegaynaa in Dambiilayaashi ka dambeeyey shirkan Qudhun-Daac aysan marna ku baxsan doonin dulmiga ay ku hayaan shacbiga Ogaadeenya. Ha dhawaato ama ha dheeraata’e meel aad ku baxsataan inaydaan dunida ka helidoonin ayaan hubnaa inu sheegaynaa dambiilayaasha ay ugu horeeyaan dulmi ku noole Abraha Wolde iyo Gacan ku dhiigle Cabdi Iley.
Waxaan u sheegaynaa Odayaasha iyo shacbiga sharafta badan ee Ogaadeenya dhibaatooyinka idinka soo gaadha gumaysiga iyo kuwa u dulaysan waxaa sabab u ah xanuunka gumaysiga ka soo gaadhaya kacdoonka gobonimadoon ee aynu ku doonayno inaan dulmiga kaka baxno. Waxaan doonaynaa wax uusan aadamuhu sahal ku helin oo ah “Gobanimo.” Gobanimada aynu doonayno ayaa u baahan in dulmi badan iyo holac loo jiidho si goobta xoriyada loo gaadho. Guumaysigu markuu ku fashilmay dagaalka hubaysan iyokansiyaasada ayuu bilaabay inuu shacbiga Sharafta badan ee Ogaadeenya afka ka caayo ama qaar uu dhafoorka qori kaga hayo naftiina caaya ku yidhaahdo. Waxaan ku leenahay guumaysiga iyo kuwa u dulaysan: Ma afkaad ku ciil-baxaysaan haday ceebi idin raacday? Maahmaah Soomaaliyeed iyo mid Inglish ah ayaa odhanaya; “Af-caytama ninkiisuu ku yaal”, “Usha iyo Dhagaxuba inay lafta waxyeelaan waa laga yaabaa, erayguse waxba ima yeeli karo.”
Sharafta iyo karaamada Alle siiyey shacabka Ogaadeenya ma aha mid ay ka qaadi karaan Dambiile Cabdi Iley iyo guumaysiga soo dirsaday. Nasabnimada iyo dhaqanka fiican ee uu leeyahay shacbiga Ogaadeenya waa mid loo dhasho ee ma aha mid cidi afka, awoodsheegasho cabsi galin, Shirki Qudhun-Daac, iyo qori caaradi kaga qaadi karto.
Waxaan kula dardaarmaynaa odayaasha iyo shacbiga sharafta badan ee Ogaadeenya; adkaysi, isku tashi, Samir, iyo Guul, Inshaa Allaah.
Jaaliyada Soomaalida Ogaadeenya eeMinnesota,
Minneapolis, Nofeembar 28, 2012